सास फेर्न मैले पनि पाउनुपर्छ
सुनेकी थिएँ, गर्भमा ९ महिना बच्चा राख्न गाह्रो हुन्छ रे । जन्माउँदा आमाले पाउने प्रसब पिडा उतिकै खपिनसक्नु गाह्रो हुन्छ रे ।
मासिक रक्तश्राप भएर शरिरबाट केहि थोपा रगत निस्कदाँ पेट दुखेर मरिहत्ते हुन्थ्यो । आमाले मलाई कति मुस्किलले जन्माइन् होला । तराईमा खानपिउन उतिकै गाह्रो थियो । बाचिञ्जेलसम्म मैले यहि सोचिरहें, धेरै पटक सोचिरहें । आमा भगवानको अर्को रुप थिइन् । लाग्थ्यो, आमाको चर्चा नगरि मेरा दिन जादैन थिएं । आमा मेरा लागि के थिईन्न र ? तपाईलाई यो बताईरहदाँ, म यो संसारमा छुईन ।
मेरी आमाले मलाई घाँटी थिचेर मारिन् । फेर्दा फेर्दैको सास रोकियो । आमाले नै प्राण लिन खोजेको देखेर होला । मेरो शरिरले बचाउका लागि केहि हरकत गरेन । सायद भित्र भित्रै मरिसकेको थियो । या भनौं, आमाको त्यो रुप देखेर सद्मामा गएको थियो । आमाले मात्र कहाँ हो र ? बुवा र आमाले मिलेर मलाई मारे ।
थाहा छ किन मारेका अरे मलाई ? मेरो चालचलन ठिक भएन अरे । म काठमाडौंमा पढ्दै गरेको मेरो क्याम्पस ब्यवस्पानले मेरो चरित्र ठिक नभएको निचोड निकालेर बुवालाई खबर गरिदिएको अरे । चालचलन भनेको के हो ? यो कसरी मापन हुन्छ ? हाँसेर दुई चार जनासंग बोल्नै नहुने ? केटा साथी बनाउनै नपाउने ? यति पनि छुट दिन नसक्ने भए जन्माएको किन ? आमाले ९ महिना पेटमा बोकेको किन ? आमालाई जन्माउन हुर्काउन भन्दा अहिले १९ बर्षको कलकलाउँदो जीवनमा छोरीको प्राण लिन सजिलो किन ?
अहिले सोच्दैछु बुवा आमाका लागि छोरी के हो ? कसैले भन्ला, घरकी लक्ष्मी, कसैले घरका गहना, कसैले कुलको इज्जत । इज्जत छोरीका कारण मात्र किन जाने ? छोरी नै हिंसाका शिकार किन हुने ?
त्यो दिन काठमाडौंको बिहानमा खासै फरक त थिएन । घाम त्यहि ठाउँबाट उदाएको थियो । फरक यति थियो, बिहान मेरो कोठाको ढोका खोल्दा ठिङरिङग उभिएका आफ्ना बाबु देखें । उनी त्यहाँ किन थिए, थाहा थिएन । मेरो हाल खबर पनि सोधेनन् । अचानक झोला बाँध घर जाने भन्न थाले, मैले आनाकानी गर्दै कारण सोधें । उनले बोल्न नदिई, जबरजस्ती मलाई लिएर घर गए ।
कलंकीबाट हामी चढेको बस छुट्यो । बससंगै काठमाडौंसंगको मेरो साथ पनि । बाटाभरी बाबु छोरी बिच केहि संवाद भएन । मेरा मनमा भने अनेंकौ कुरा खेलिरहे । बिचमा पढाई छाडेर मलाई कता लग्या होलान ? किन होला ? बुवाले नबुझेको कुरा आमाले बुझलिन् भन्ने बिश्वास थियो ।बच्चपनमा पनि बाबुले पिट्न खोज्दा कैयौं पटक आमाको धोतीको फेरो भित्र लुकेर बाबु कुटाईबाट बचेंकी थिएं । मनमा त्यो आश जिवीतै थियो ।
घर नपुग्दासम्म म माथी के हुदैंछ, मलाई थाहा थिएन । मेरो बिहेको कुरो छिनेको थियो । गाउँकै एक युवकसंग । कुरो छिनेपछि ति युवकलाई म मनपरिनछु, अनि उनले बिहेको लागि इन्कार गरिदिएछन् । मेरो बाबु आमाले त्यसको दोष पनि मलाई नै दिए । मैले काठमाडौंमा केटा साथीहरु बनाएर अक्षम्य अपराध गरेकी रैछु, मेरा अभिभाबकको नजरमा ।
आमालाई टाउको झुकाएर ढोग गर्दा आर्शिवाद देलिन भन्ने आश थियो । आमा बाबु त मलाई मार्ने योजना बनाइसकेका रहेछन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? मारेपछि कसरी मेरो लास जलाउने देखी कसरी प्रहरीसंग जोगिनेसम्मका तयारी गरेर मलाई लिन आएका रहेछन् । मलाई उनैले धरतीमा ल्याए । अनि उनैले मेरो इच्छा बिना नै धड्कन रोके ।
बाबु आमाले कुटीकुटी मेरो हत्या गरेर मलाई जलाइरहेका थिए । म जलिरहेको आगोबाट निस्किएको धुवाँले चिच्याइ चिच्याई भनिरहेको थियो, आमा बुवाका लागि अभिषाप थिएँ म । धुवाँ र खरानी भएर आकाशमा समाहित हुन खोजिरहदाँ आमाको अनुहार हेरेकी थिएँ, उनको अनुहारमा पश्चाताप अलिकति पनि देखिन । अनि मलाई आमा भन्ने शब्दसंग घृणा भयो ।
टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आमा बाबुले नै छोरीहरु मारेको समाचार र कहानी सुन्दै आएकी थिएं । अचम्म लाग्थो, कस्तो मन भएका आमा बुवाले त्यस्तो गर्छन् होला जस्तो लाग्थो । आज आफ्नै बाबु आमाले मलाई त्यसरी नै मारे । तपाई यो पढ्दै गर्दा म कहिं कतै आकाशमा हुनेछु । बादलमा धुवाँ भएर बिलिन भइसकेको हुनेछु ।
यति भन्न चाहन्छु, समाज र दुनियाँलाई देखाउन कै लागि मात्र छोरीको जीवन होइन । पुतलीले पनि पखेटा लागेपछि आफ्ना छोरा छोरीलाई उड्न दिन्छ । के तपाई दिन सक्नुहुन्न ? त्यति आजादी दिन सक्त्तैनौं भने गर्भमै मारिदेउ ।
(जनकपुरमा आमा बुवाले नै कुटेर हत्या गरेकी १९ बर्षिय किशोरीमा समर्पित)
मेरा हुलाकी बुवा
बुवा जिवित हुनुहुन्थ्यो भने, सायद म यी कुराहरु लेख्दिन थिएँ । तीन बर्ष अघिसम्म त बुवालाई फोन गरेर हरेक साल झै मुख हेरें है बुवा भनिदिन्थें । बुवाले पनि फिस्स हाँस्दै ‘देखिस् त कस्तो रैछ’ भन्नुहुन्थ्यो ।
मेरा बा दैनिक आठ घण्टा हिडेर थाकेको शरिर लिएर घर आइपुगेपछि खुईया गर्दै लौरो सिकुवाको काठमा चेपेर अड्याउनु हुन्थ्यो । ४५ बर्षमा पनि ६० बर्षे भैंm देखिने मेरा बुबाको दैनिकी यस्तै थियो, झोला भरी चिठ्ठी पत्र बोकेर हरेक दिन आठ घण्टाको हिंडाइ । चार घण्टा चिठीपत्र पुर्याउन र ल्याउन चार घण्टा । उमेर नढल्किदै बुढ्यौली लागेजस्तो देखिने शरिर, हरेक दिनको थकान, चाउरी परेका गाला । घर पुग्नासाथ गाईबस्तुको चटारो, परिवार प्रतिको दायित्व, सँधै केही नपुगेको जस्तो र केही खोजी रहेका जस्ता गाढिएका आँखा । बुबाको स्मरण यही र यस्तै परिदृष्यबाट सुरु हुन्छ ।
हामीसँग जुन कुरा साथमा छ, त्यसको महत्व धेरै हुदैन । आज मेरा बुवा जिवित हुनुहुन्थ्यो भने, सायद म यी कुराहरु लेख्दिन थिएँ होला । तीन बर्ष अघिसम्म त बुवालाई फोन गरेर हरेक साल झै मुख हेरें है बुवा भनिदिन्थें । बुवाले पनि फिस्स हाँस्दै ‘देखिस् त …
जहाँ गए नि स्वाद नेपाली
पोखराबाट पढ्न अमेरिका आएका विकास क्षेत्रीलाई उनकी आमाले हिड्ने बेलामा झोलाभरी खाने कुरा हालिदिएकी थिईन् । अमेरिकामा नेपाली स्वादका खाने कुरा छोराले खान नपाउला भन्दै उनले तितौरा, अकबरे खुर्सानी, गुन्द्रुक हालिदिएकी थिईन् । तर विकासलाई यहाँ आएको दुई चार दिनमै नेपालबाट नेपाली स्वाद बोकेर ल्याउन नपर्ने थाहा भयो । नेपालीहरुले ब्यापार गर्दै आएको स्टोरमा नेपाली भान्सामा पाक्ने प्राय सबै चिज पाईन्छ । सन्नीभेलमा रहेको गालामार्ट स्टोरले लामो समय देखी नेपालबाट नै सामानहरु मगाएर बेच्ने गरेको छ । ‘नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको स्थानमा नेपाली सामान भेटिनु राम्रो हो’ क्षेत्रीले भने ‘सबै कुरा यतै यसरी भेटिन्छ भन्ने थाहा थिएन ।’ स्टोरमा गुन्द्रुक, सिन्की, टिम्बुर, देखी जिम्बुसम्म पाईन्छ । त्यो बाहेक, फापर कोदोको पिठो, तामा, खुर्सानीको अचार, तितौरासम्मका सामान पाइन्छ । वाइवाई चाउचाउ पनि पाइन्छ । यो क्षेत्रमा नेपालीहरुले नेपाली परिकारहरु बनाएर बेच्ने समेत गरेका छन् । कुनै कुनै प्रकारका अचार छिट्टै सकिने सकिने गरेको ब्यापारी बताउँछन् ।
प्रतिमा बाँस्काेटा क्यालिफाेर्निया | मङि्सर १७, २०७५
कलिलो उमेरका विद्यार्थीलाई विदेशमा असाधारण तनाव साथीसँग फोनमा कुरा गर्दागर्दै एक नेपाली युवाले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पासो लगाएर आत्महत्या गरेका छन् । सन्नीभेल सहरमा बस्दै गरेका २४ वर्षीय गणेश तिवारीले बिहीबार आत्महत्या गरेका हुन् । उनी नवलपरासीका हुन् । आत्महत्या गर्नुअघि तिवारीले नजिकै बस्ने अर्की एक साथीलाई भिडियो कल गर्दै आत्महत्या गर्न लागेको बताएका थिए । परीक्षा दिन तयार रहेकी ती साथीले जिस्किएको ठानिन् । तैपनि अर्का एक साथीलाई तिवारी बस्ने घरमा पठाएकी थिइन् । ‘ठट्टा सोच्दासोच्दै सत्य भयो,’ उनका साथीले भने । तिवारी हाइल्यान्डर अपार्टमेन्टमा दुईजना साथीसँग बस्दै आएका थिए । ती साथीहरूका अनुसार अरू वेला पनि उनी आत्महत्या गर्ने कुरा गरिरहन्थे । ‘अमेरिका आएपछि पहिला पनि कोसिस गरेँ, तर सकिनँ भन्थ्यो,’ उनका एक साथीले भने, ‘जे कुरा गर्दा पनि एकदम उत्साहित हुन्थ्यो, जसले जे गरम् भने पनि ल गरम्–गरम् भन्थ्यो ।’
बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि काममा जानुपर्ने तिवारी ढिलो समयसम्म नउठ्दा उनका ‘रुममेट’ र अर्का एक विद्यार्थीले ढोका फुटाएका थिए । र…